चीन टंगस्टन सॉलिड कार्बाइड रडहरू स्थिर उच्च गुणस्तरको निर्माण र कारखानाको साथ NCC
आकार दायरा: D1.0 ~ 40.0mm, L: 13 ~ 700mm
कार्बाइड डण्डको परिचय
१. टंगस्टन ठोस कार्बाइड डण्ड मोल्डिंग वा एक्सट्रुसन द्वारा मोल्ड गरिएको प्रेस हो।
२. टंगस्टन ठोस कार्बाइड डण्ड कम प्रेशर sintering एकीकृत भट्टी द्वारा sintered छ, यसैले समग्र प्रदर्शन उच्च छ।
The.रफ टंगस्टन-कोबाल्ट कार्बाइड राउन्ड बार, वा राउंड बारको बाहिरी व्यास कुनै पनि सहिष्णुता अनुरुप परिष्कृत र पालिश गर्न सकिन्छ। सामान्य सहिष्णुता h5, h6, -0.005, आदि हो, र कार्बाइड रड्स एंड चेम्फर पनि प्रशोधन गर्न सकिन्छ।
C.कार्बाइड डण्ड सामान्य स्टील, कास्ट फलाम, स्टेनलेस स्टील, तातो प्रतिरोधी इस्पात, निकेल आधार र टाइटेनियम मिश्र धातुको प्रशोधनको लागि उपयुक्त छ। सामान्य उद्देश्य कार्बाइड उपकरण सामग्रीको लागि सिफारिश गरीन्छ जस्तै ट्विस्ट ड्रिल, अन्त्य मिलहरू, ट्यापहरू, र बन्दूक ड्रिलहरू।
हाम्रो ग्रेडको परिचय
कार्बाइड रडहरूको हाम्रो टाईपहरू
1. चारै तिर लामो रडहरू
TOL। अनग्राउन्ड लामो डण्डको
D (मिमी) एल (मिमी)
D [१- 1-3) x310 / 3030० ०.30० ~ ०.55 ०.०० ~ + 00.००
D [-12-१२) x3१० / 3030० ०.30० ~ ०.60० ०.०० ~ + 00.००
D [१२-२०) x3१० / 3030० ०.30० ~ ०..65 ०.०० ~ + 00.००
D [२०-40०] x3१० / 3030० ०.30० ~ ०70० ०.०० ~ + 00.००
२.रैउन्ड कट-टू-लम्बाइ डन्ड
TOL। अनग्राउन्ड कट-टू-लम्बाइ रडहरूको
D / L (मिमी) TOL.of D&L मिमी मा
Previous: टung्ग्स्टन सॉलिड कार्बाइड अन्त मिल्स
Next: टंगस्टन कार्बाइड नोजल उच्च गुणवत्ताको साथ